2 August, ntinye Saint Francis nye mgbaghara nke Assisi | Ilblogdellafede
Ọgọst 2, ntinye obi na mgbaghara nke St. Francis nke Assisi
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 2, 2020 Ọgọstụ 3, 2020
Site na St.Francis, site na etiti ehihie nke 1 Ọgọstụ ruo etiti abalị nke echi, ma ọ bụ, site na nkwenye ndị Bishọp, na ụbọchị gara aga ma ọ bụ na-esote Sọnde (malite na etiti ehihie na Satọdee ruo etiti abalị na Sọnde) ọ ga-ekwe omume irite, naanị otu ugboro, ihe ahụ. Porziuncola (ma ọ bụ Perdono d'assisi) nwere usoro ntinye aka.
EKPERE MAKA ANYI AGO
Onye nwem Jisos Kraist, ekwere m n’onodu idi nso na Sakrament di ngozi, ma chegharia na nmehiem, a na m ario Gi ka inye m nsọ nke mgbaghara nke Assisi, nke m na etinye n’oru maka mkpuru obi m na imeju nkpuru obi di nsọ na Purgatory. M na-arịọ gị arịrịọ dị ka ebumnuche Pontiff kachasị elu maka mbuli nke Nzukọ Nsọ na ntụgharị nke ndị mmehie dara ogbenye.
Cinque Pater, Ave na Gloria, dị ka ebumnuche nke Pontiff Nsọ, maka mkpa nke Nzukọ Nsọ. Pater, Ave na Gloria maka ịzụta ndị SS. Indulgences.
OGWU ANYA EGO
1) Gaa n'ụlọ ụka parish ma ọ bụ ụlọ ụka Franciscan
ma na-echeta Nna anyị na Okpukpe.
Nkwupụta nke Sakramental.
3) Eucharistic Communion.
4) Ekpere dika ebum n’obi Nna ya.
5) Ọnọdụ nke uche nke na - ewepụ mmetụta ọ bụla maka mmehie, gụnyere mmehie achọrọ ya.
Enwere ike ịd ị nt ụ ma ọ b ụ nye onye nw ur u anw u.
N'otu abalị n’afọ 1216, a mikpuru Francis n’ekpere na ịtụgharị uche na ntakịrị ụlọ nke Porziuncola, mgbe na mberede, oke enwu na-enwu gbaa ma hụkwa Kraist n’elu ebe ịchụ-aja na Madonna n’aka nri ya; ha abụọ na-enwu gbaa ma nwee ọtụtụ mmụọ ozi. Francis jiri nwayọ fee Onye-nwe ya n ’ihu. Mgbe Jizọs jụrụ ya ihe ọ chọrọ maka nzọpụta nke mkpụrụ obi, ihe nzaghachi Francis bụ: “Nna dị nsọ kachasị, ọbụlagodi na abụ m onye mmehie, ana m ekpe ekpere ka ndị niile, chegharịrị ma kwupụta nkwupụta, bịara leta nke ụka a. mgbaghara zuru oke na mgbaghara, na mgbaghara nke mmehie niile. " “Ihe ị jụrụ, nwanne nwoke Francis, dị ukwuu - Onyenwe anyị gwara ya - mana ị tozuru oke na ị ga-enwe nke ka ukwuu. Ya mere, ana m anabata ekpere gị, ma ọ bụrụ na ị rịọrọ Vicar m n'ụwa, maka nke m, maka afọ ojuju a. " Francis wepụtara onwe ya ozugbo nye Pope Honorius nke Atọ bụ onye nọ na Perugia n'oge ahụ ma gwa ya hoo haa banyere ọhụụ ọ hụrụ. Pope na-ege ntị nke ọma ma mgbe nsogbu ụfọdụ gachara nkwado ya, wee sị: "Afọ ole ka ị chọrọ ime afọ ojuju a?". Francis snapping, zara, sị: "Nna dị nsọ, anaghị m arịọ maka ọtụtụ afọ, kama ọ bụ maka mkpụrụ obi". Na obi ụtọ ọ gara n'ọnụ ụzọ, mana Pontiff kpọrọ ya azụ: "Kedu, ị chọghị akwụkwọ ọ bụla?". Francis na: “Nna di nsọ, okwu gi ezuru m! Oburu na ibu ochicho a bu oru nke Chineke, oga eche echiche igosiputa oru ya; Achọghị m akwụkwọ ọ bụla, kaadị a ga-abụrịrị Virgin Mary dị nsọ, Christ notary na ndị mmụọ ozi dịka ndị akaebe. " Abọchị ole na ole ka nke ahụ gasịrị, ya na ndị bishọp nke Umbria, o ji anya mmiri wee jupụta ndị mmadụ gbakọtara na Porziuncola: "brothersmụnne m, achọrọ m iziga unu niile gaa Eluigwe"
← Na post gara aga Gara aga post:Ọgọst 1, 2020: ozi nke Nwanyị nwanyị anyị dị na Medjugorje
Ọzọ Post → Post ozo:Chee maka obere onyinye ọ bụla ị nwere ike inye taa